डेल्फी, ग्रीस | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | ग्रीस, के हेर्ने
ग्रीस त्यस्तो गन्तव्य हो जुन कुनै पनि यात्रीले गुमाउनु हुँदैन। यसमा सबै थोक छ: अविश्वसनीय ग्यास्ट्रोनमी, धेरै इतिहास, धेरै संस्कृति र पुरातात्विक साइटहरू मात्र मिस्रको साथ तुलना गर्न सकिन्छ। ती मध्ये एक छ डेल्फी र युनेस्कोले यो ठाउँ घोषित गरेको छैन विश्व सम्पदा.
हामी सबैको बारेमा सुनेका छौं डेल्फीको ओरेकल केहि बिन्दुमा, यो त्यस्तै हो? Divines, भविष्य पठन, शकुन…। पुरातन कालको यी कथाहरू बाहेक वा निश्चित रूपमा तिनीहरूको कारणले गर्दा, सत्य यो हो कि यो गन्तव्य हो जुन तपाईं याद गर्न सक्नुहुन्न।
1 डेल्फीमा के हेर्ने
आज सहर पर्नससस पर्वतमा रहेको ढाँचामा अवस्थित छओरेकलको प्रसिद्ध ठाउँ र अपोलोको अभयारण्यको एकदम नजिक छ, कस्तरी शहर नजिकै र कोरिन्थको खाडीबाट केवल १ km किलोमिटर टाढा।
पुरातन समयमा पहाडी पर्वतहरूको बीचमा यसको स्थान पहुँच गर्न गाह्रो भयो, त्यसैले त्यहाँ प्रवेश गर्ने तीन तरिकाहरू थिए: अनफिसाबाट, क्रिसाबाट र बुओटियाबाट। यो एक थियो सानो शहर यसको आफ्नै भूगोलबाट अत्यधिक रक्षा गरिएको छ, तर यसको लागि भित्ता पनि निर्माण गरिएको थियो।
पुरानो ग्रीक भन्दा पहिले नै यो ठाउँ पवित्र मन्दिरको रूपमा चिनिन्थ्यो। होमरले भने कि ओरेकलको जग अपोलोको होजो पर्नससस पर्वतको नजिक एउटा भेट्न चाहन्थे, त्यो ठाउँलाई धेरै मनपर्‍यो र मन्दिर निर्माण गर्नुभयो। अवश्य पनि, उनले सर्प र राक्षसहरूको ठाउँ सफा गर्ने काम गर्थे, क्रेटन्सका माझ पुजारीहरूलाई आकर्षित गर्थे र सबै कुरा व्यवस्थित गर्थे। वा त्यसोभए तिनीहरू भन्छन्।
सत्य यो हो कि सुरूमा क्रिसा शहरले अर्कल र अभयारण्यलाई प्रभुत्व जमायो, तर अन्तमा, पवित्रस्थानको छेउमा अर्को शहरले आकार लिन थाल्यो जुन निश्चित स्थानमा यसको जिम्मेवार लिन भन्यो: डेल्फी समयको अन्तर्गत डेल्फी क्रिसा र यसको बन्दरगाह भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण थियो र यो एक बन्यो शक्तिशाली शहर - राज्य। पवित्र मन्दिरका पुजारीहरू स्थानीय वंशबाट चुनिएका थिए जो डोरीक मूलका हुन्थे, र तिनीहरूका शासकहरू पनि।
यहाँ कुनै प्रजातन्त्र वा त्यस्तै केही थिएन। डेल्फीको सरकार एक थियो ईश्वरतान्त्रिकता किनकि सबै चीज मन्दिर र यसको पूजाको माध्यमबाट भएर जान्थे। जमिन दासहरूले काम गर्थे र पुजारीहरूले धनी राजाहरू र व्यापारीहरूले उनीहरूलाई उपहार र चन्दा दिन्थे जसले ओरेकलको सल्लाह लिएका थिए। हामीलाई थाहा छैन त्यस्तो केहि छैन। ओरेकल त्यतिबेला सुपर प्रख्यात थियो त्यसोभए जब ईसापूर्व in 548 मा आगोले सतायो भने यसलाई अझ बढी महिमाका साथ निर्माण गर्ने निर्णय गरियो।
पछि फारसीहरू आइपुग्छन्, विनाशकारी भूकम्प, मन्दिरको खजाना धेरैलाई आकर्षक भएकोले केहि जबरजस्ती कब्जा, केही लुटपाट र अन्तमा नीरो उनले सयौं मूर्ति लिए अनि आफ्ना सिपाहीहरूको माझमा जमिनहरू बाँडिदिए र ओरेकल समाप्त गरे। यो एड्रानियोको सहयोगबाट अलि लामो चल्‍यो तर अन्तमा थियोडोसियस प्रथमले ag 385 मा गैरमसीही पूजालाई प्रतिबन्धित गर्‍यो। इसाईमतको आगमन संग यो बिर्सिएको र उपेक्षित भइरहेको थियो।
पुरातात्विक उत्खनन १ th औं शताब्दीमा जर्मनहरूको हातबाट शुरू भयो र हामी उनीहरूको धेरै प्रभावशाली भेट्टायौं र वर्तमान उत्खननहरू thatणी गर्छौं जुन फ्रान्सेली स्कूल अफ एथेन्सको हातमा जारी छ।
डेल्फीमा के हेर्ने
पुरातात्विक साइट दुई अभयारण्यहरू छन्, एउटा एथेनालाई समर्पित छ र अर्को अपोलोलाई र अन्य खेल भवनहरू। जब तपाईं एथेन्सबाट सीधा आइपुग्नुहुन्छ तपाईंले देख्नुहुने पहिलो चीज एथेना प्रोन्नियाको अभयारण्य हो, अपोलोको मन्दिर अघि। पर्खाल बाहिर डेल्फीको बस्ती विस्तार गर्दछ, तर भित्ताहरू भित्र जहाँ थालोस आज टापुको प्रतीक हो, र ती देवीदेवतालाई समर्पित तीन मन्दिरका के बाँकी छ।
त्यहाँ दुई पुराना मन्दिरहरू छन् 500th औं शताब्दी र BC०० ईसापूर्वको मध्यदेखि डेटि The तेस्रो मन्दिरलाई चुनढुstone्गाले बनेको थियो जुन एउटा भूकम्पले ई.पू. destroyed destroyed in मा ध्वस्त पार्‍यो अभयारण्यमा पनि ज्यूस, एथेना एरगने, एथेना जोस्टेरिया, इलेथिथिया र हाइजियाका वेदीहरू पनि सामेल छन्। स्थानीय नायकहरूको पूजा गर्न समर्पित दुई भवनहरूको अवशेषहरू जसले टापु, अटोनिस र फाइलाकोसबाट फारसीहरूलाई भगाए।
यस ऐतिहासिक तथ्यको सम्बन्धमा त्यहाँ एक स्मारक पनि छ,aसम्राट हेड्रियनको मूर्ति र "पुजारीहरूको घर" को रूपमा चिनिने भवन। एथेनाको अभयारण्यको उत्तरपश्चिममा यो छ जिम, मैदान र बाथरूम। त्यहाँ पहाड माथि वसन्त ,तु हुन्थ्यो डेल्फीको पवित्र वसन्त ती यात्रीहरूले प्राय: पिउन र ओरेकल परामर्श गर्नु अघि आफूलाई शुद्ध पार्छन्।
स्थानको हृदय जबकि अपोलोको अभयारण्य हो, दक्षिण पूर्वमा मुख्य प्रवेशद्वारसहित पर्खालले घेरिएको। यहाँबाट अप्रोलोको मन्दिरमा पुग्ने सेक्रेड वे वा बाटो शुरु हुन्छ, जहाँ पुजारीले उनको भविष्यवाणी गरिरहेछन्। छेउछाउमा कृत्रिम छतहरू छन् स्मारकका पर्खालहरू सहित पोर्चिको र थुप्रै धनी मानिस र ग्रीक देवताहरुलाई समर्पित स्मारकहरु।
यी सबै स्मारकहरू हुन्, जसमध्ये केहि धेरै सुन्दर छन्, जुन विभिन्न क्षणहरूको कलात्मक स्तर र ओरेकललाई धन्यवादको रूपमा यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरूको सम्पत्तिलाई दर्शाउँछ। त्यहाँ केही कांस्य वा चाँदी पनि छन्, उत्कृष्ट संगमरमर, र तिनीहरू धेरै विलासी छन्।
यो स्थान वास्तवमै केहि प्रभावशाली र पूर्ण छ र गतिविधिमा यो अद्भुत भएको हुनुपर्छ। मन्दिरको अगाडि सोच्नुहोस् त्यहाँ एक थिएटर थियो जहाँ संगीत र थिएटर प्रतियोगिताहरू भएको थियो र अझ अझै अझै थिए एथलेटिक्स प्रतियोगिताहरूका लागि एक स्टेडियम। काल्पनिक! को अवशेष जोड्नुहोस् शास्त्रीय र रोमन अवधिहरूको कब्रिस्तान जुन बाहिर र अभयारण्यहरू वरिपरि छन् र तपाईं हिंड्न, फोटो लिन र कल्पना गर्न धेरै समय खर्च गर्नुहुनेछ।
तपाईं कसरी डेल्फीमा पुग्न सक्नुहुन्छ? डेल्फीको आधुनिक शहर सडकमा छ जुन अम्फिसालाई Itea र Archov सँग जोड्दछ। पर्यटकहरु संसार भर बाट आएका छन् किनकि पुरातात्विक साइट धेरै नजिक छ। उहाँमा छ डेल्फीको पुरातात्विक संग्रहालय यसको सबै खजाना संग। डेल्फी यो एथेन्सबाट दुई घण्टा भन्दा बढीमा छ कारबाट। डेलफि अझै पनी गाह्रो क्षेत्रमा छ तपाईं सडकमा मात्र त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ र सब भन्दा राम्रो कुरा भनेको यात्राको फाइदा लिनको लागि अन्य ठाउँहरू जान्नुहोस्, उदाहरणका लागि मेटेओरा र यसको मठहरू।
तपाईं कार भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ वा बसमा जान सक्नुहुन्छ। एथेन्स - डेल्फी मार्ग एक दिन छ सेवा संग कभर छ। बस टर्मिनल बी देखि एथेन्सको Liossion Street मा बिहान :7: .० देखि 30 सम्म छुट्टिन्छन्। लगभग तीन घण्टाको यात्रालाई अनुमति दिनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » ग्रीस » डेल्फी, ग्रीसमा
Conil de la Frontera मा के हेर्ने